Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Canada ga-enye saịtị mwepu onwe ọhụrụ sitere na COVID-19
Agbanyeghị, maka ụfọdụ ndị nọ na Canada, ọnọdụ ụlọ juru ebe niile na ọnụ ahịa dị elu nwere ike ime ka ọ bụrụ ihe na-adịghị mma ma ọ bụ na-agaghị ekwe omume ikewapụ onwe ya, na-etinye onwe ha, ezinụlọ ha na obodo ha n'ihe egwu n'enweghị mmejọ nke onwe ha.
Taa, Honorable Jean-Yves Duclos, Minista Ahụike, kwuputara ihe karịrị nde $5 iji kwado ọrụ abụọ ndị a na British Columbia, site na Mmemme Safe Voluntary Isolation Sites nke gọọmentị Canada:
• mmemme nkwụghachi ụgwọ dabere n'ọrụ maka ndị ọrụ ugbo bi ma na-arụ ọrụ n'ofe British Columbia site na Gọọmenti British Columbia's Ministry of Agriculture, Food and Fisheries iji nyere aka kwado mkpa ikewapụ onye ọrụ ugbo; na
• saịtị dịpụrụ adịpụ nke afọ ofufo dị mma na Obodo Surrey site n'aka Fraser Health Authority.
Saịtị ikewapụ onwe onye afọ ofufo na-enyere ndị nwere COVID-19—ma ọ bụ ekpughere ya—ịnweta ebe obibi dịpụrụ adịpụ iji chekwaa onwe ha na obodo ha. Saịtị ndị a na mgbakwunye na akụrụngwa dị maka ndị na-enwe enweghị ebe obibi chọrọ ikewapụ n'ihi nnwale dị mma.
Saịtị dịpụrụ adịpụ nke afọ ofufo na-ebelata ohere nke ịgbasa nje a n'etiti ndị na-akpakọrịta ezinụlọ n'ọnọdụ ebe ndị mmadụ na-eche ụlọ ndị mmadụ juru ihu na enweghị ụzọ ọzọ. Saịtị ndị a bụ otu n'ime ngwa nzaghachi ngwa ngwa eguzobere iji nyere aka kwụsị mgbasa nke COVID-19, enwere ike ibuga ya na obodo na-eche ntiwapụ.
Mmemme Safe Voluntary Kewas Mmemme na-akwado ozugbo obodo, ime obodo na mpaghara ahụike nọ n'ihe ize ndụ nke mgbasa ozi obodo COVID-19. Saịtị ahọpụtara n'okpuru mmemme a na-enye ebe enwere ike ịnweta ebe ndị mmadụ nwere ike kewapụ onwe ha n'enweghị nsogbu maka oge achọrọ. Ndị ọrụ ahụike ọha na mpaghara na-ekpebi ndị tozuru etozu enwere ike ịnye nhọrọ ịfefe na saịtị dịpụrụ adịpụ n'afọ ofufo iji chekwaa ha na ndị ezinaụlọ ha n'oge ntiwapụ n'obodo ha.